गाँजा सेवन गर्ने महिलामा बढि यौन उत्तेजना हुन्छ किन ? यस्तो छ रहस्य - Experience Best News from Nepal
गाँजा सेवन गर्ने महिलामा बढि यौन उत्तेजना हुन्छ किन ? यस्तो छ रहस्य
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, बैशाख २४, २०७६
अमेरिकामा हालसालै गरिएको एक अध्ययनले एकतिहाइ महिला यौन सम्पर्कभन्दा अगाडि गाँजाको प्रयोग गर्ने देखाएको छ । गाँजा पिएपछि यौन सम्पर्क राख्दा बढी सन्तुष्टि महसूस भएको र यौनप्रति इच्छा अझै बढेको अध्ययनमा संलग्न महिलाहरुले बताएका थिए । त्यस्तै, यौन सम्पर्कको बेला बढी लुब्रिकेशन (तरलता) को महसूस हुनुका साथै पीडा पनि कम भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धाताका अनुसार अमेरिकामा हाल वयस्कहरुबीच गाँजा प्रयोग निकै बढेको छ । अमेरिकाका कतिपय राज्यले औषधि तथा रमाइलोका लागि गाँजा प्रयोगमा कानूनी रूपमा नै छूट दिएकाले यसको प्रयोग बढेको हो ।
अनुसन्धाताका अनुसार गाँजाले यौन स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा निकै कम अध्ययन भएका छन् । गाँजाले मस्तिष्कमा रहेको यान्नाबिनोइड रिसेप्टरमा असर पुर्‍याउँछ जुन यौनिक अवयवसँग सम्बन्धित छ ।
यो अध्ययनमा विशेषतः महिलाको यौनजीवनमा सन्तुष्टि, यौन उत्तेजना, चरमोत्कर्ष, तरलता, यौनसम्पर्कको बेला हुने पीडा आदिसँग गाँजाको कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भनी खोजी गर्ने कोसिस गरिएको अनुसन्धाताको भनाइ छ ।
अध्ययनमा संलग्न ५२ प्रतिशत महिलाले गाँजाको प्रयोग गरेकै थिएनन् भने १३ प्रतिशतले गाँजा सेवन गर्ने गरे पनि यौनसम्पर्कभन्दा अघि भने प्रयोग नगरेको बताएका थिए ।
यो अध्ययन सीमित व्यक्तिमा मात्रै भएको हुनाले यसले यौन स्वास्थ्यमा गाँजाले केकस्तो असर पार्छ भन्ने निश्चित गर्दैन । तथापि, अध्ययनले यौन स्वास्थ्यका लागि गाँजाको प्रयोग उपयुक्त छ कि छैन, छ भने केकसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी अध्ययनको अन्य मार्ग भने प्रशस्त गरेको छ । एजेन्सी
किन पुरुषलाई शारीरिक सम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ? डक्टरहरु यसो भन्छन् !
छोरी मान्छेले दिनहुँ हस्तमैथुन गर्दा के–कस्तो असर पर्छ ? यस्तो छ डाक्टर भनई !
सबैभन्दा आनन्द कहाँ ? यस्तो छ डाक्टरको भनाइ !
यसरी यौन सम्पर्क गर्दा महिलालाई हुन्छ औधी आनन्द !